टेकु अस्पताल: संक्रमित र स्वास्थ्यकर्मीले आँखाभरी आँसु पार्दै भने- स्थिति नियन्त्रणमा छैन [भिडियो] :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
टेकु अस्पताल: संक्रमित र स्वास्थ्यकर्मीले आँखाभरी आँसु पार्दै भने- स्थिति नियन्त्रणमा छैन [भिडियो]
अस्पतालबाट संक्रमितको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीज्यू, स्थिति कसको नियन्त्रणमा छ?
रिता लम्साल आइतबार, वैशाख २६, २०७८, २३:४०:००
काठमाडौं– ‘हामीले धान्न नसक्ने भयौं। कसरी हेर्ने यो अवस्था’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राजभण्डारीले धरमराउँदो स्वरमा बोले।
शुक्रराज अस्पतालमा कोरोना संक्रमितले सबै बेड भरिएको छ। अस्पतालको प्यासेजमा समेत अटेसम्म बेड थप गरी बिरामी राखिएको छ।
आकस्मिक सेवा कक्षभित्र संक्रमित भरिभराउ छन्। आकस्मिक कक्ष बाहिर कुर्सी, म्याट र केही बेडमा कोरोना संक्रमितहरुलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको छ।
अस्पतालको क्षमताभन्दा धेरै बिरामीले अस्पताल भरिएपछि निर्देशक डा राजभण्डारीको आँखा रसाएका छन्। संक्रमितको अवस्था र आफन्तको शय्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आग्रहमा उनी निरिह भएका छन्। अस्पतालले सकेजति स्थानमा शय्या राखेको छ। भ्याएसम्म स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन्। तर संक्रमितको चाप थामिनसक्नु छ। अनि उनीहरुको पिडाले अस्पताल पुग्नेको आँखा आँशुले भरिने वातावरण छ।
चिकित्सकहरु आकस्मिक सेवा बाहिर रहेका बिरामीलाई अक्सिजन मिलाउदै र अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्दैछन्। चिकित्सकहरुलाई आकस्मिक कक्षभित्र र बाहिर बिरामीको स्वास्थ्यजाँच, उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न भ्याइनभ्याइ छ।
त्यही अवस्थालाई हेरिरहेका अस्पतालका निर्देशक डा राजभण्डारी आफैं मलिन अनुहारमा छन्। बिरामी र आफन्तको रोदन सुनेपछि उनी आफैं पनि भावुक हुन्छन्।
उनको अनुहारलाई नियाल्दा लाग्छ, डा राजभण्डारी आफ्नो आँसुलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा राखेर झार्न नदिने पर्यात्न गरिरहेका छन्। तर आँखाका डिलमा आँशु टाढैबाट प्रश्ट देखिन्छ।
‘हेर्नुस् न हाम्रो अवस्था, ठाउँ छैन बिरामी आउनेक्रम बढ्दै गइरहेको छ। अरु अस्पतालमा पनि यस्तै छ अवस्था, टेकुले मात्र खै कसरी धान्ने यतिका बिरामी?’ उनले रुन्चे स्वरमा अन्यौलता सुनाए।
‘अवस्था भयावह भयो, कन्ट्रोलमा त छदैँ छैन’ संक्रमित हेरेर आकस्मिक कक्ष भित्र पस्दै गरेका अर्का चिकित्सकले थपे।
अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो घरपरिवार छोडेर २४ घण्टा नै ड्युटीमा खटिएका छन्। सम्भव भएसम्म बिरामीलाई उपचार सेवा दिने प्रयासमा जुटिरहेका छन्।
आकस्मिक सेवा बाहिर रहेका संक्रमितका आफन्तले चिकित्सकलाई घेरा हाल्दै आग्रह गर्छन्, ‘सबै ठाउँमा धाएँ, काँही भर्ना लिँदैनन्, यहीँ बेड मिलाइदिनुस् न है।’
‘नआत्तिनुस् सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छौं,’ चिकित्सकहरु संक्रमितका आफन्तलाई सम्झाउँछन्।
आकस्मिक कक्षबाहिर अक्सिजनमा रहेका एक संक्रमितले हामीलाई देखेपछि टाढै बस्न इसारा गरे। अनि अक्सिजनको लगाइएको पाइप खोलेर भने सरकारले ‘ढाँटी रहेछ। हामी पिडामा छौं। स्थीति नियन्त्रणमा छैन।’ आक्रोशित स्वरमा यत्ति भनेर उनले पुन अक्सिजन अनुहारमा लगाए।
संक्रमितका आफन्तको पनि उस्तै आक्रोश छ। संक्रमितको स्थिती हेर्न अस्पताल आउन भन्दै उनीहरु प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती समेत दिएका छन्।
‘यहाँ स्थिती यस्तो छ। बालुवाटारको कोठा भित्र बसेर स्थिती नियन्त्रणमा छ भन्नेलाई टेकु अस्पताल आउन म चुनौती दिन्छु एक संक्रमितका आफन्तले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, जनता अक्सिजन नपाई मरिरहेको नदेख्ने? अनि विदेशी मिडियालाई चाँही झुटो बोल्ने?’
स्वास्थ्यखबरसँग यी संक्रमितले सरकारले संक्रमितको उपचारमा चासो नदिएका विषयमा अनपौचारिक रुपमा धेरै कुरा सुनाए। तर औपचारिक रुपमा बोल्दा भोली जोखिम हुने डरले उनी भिडियो संवादमा भने आउन मानेन्।
आकस्मिक कक्षमा रहेका अर्का संक्रमितका आफन्तले दुःख पोख्दै कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भन्दै गर्दा सरकार भने सत्ताको खेलमा लागेको भन्दै सरकार भएको आभाष नै नभएको सुनाए।
‘सरकार राजनीतिक गञ्जागोलमै मस्त छ,’ उनले भने, ‘सरकार छ कि छैन आभास नै भएको छैन, सरकार आफ्नै तालमा छ, हामी जनताले दुःख पाइरहेका छौं। यो सरकार भएको केही काम छैन।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आकस्मिक सेवामा २४ घण्टा नै ड्युटीमा खटिएका छन् डा श्रवण कुमार मण्डल।
डा मण्डलका अनुसार १५ बेड मात्र रहेको अस्पतालको आकस्मिक कक्षलाई २५ बेड क्षमतामा बढाइएको छ। तर, संक्रमितको चाप अनुसार बेड अझै अपर्याप्त छ।
संक्रमित बढिरहेकाले अस्पतालले आकस्मिक कक्ष बाहिरै पनि अक्सिजन दिएर उपचार गरिएको डा मण्डलले सुनाए।
‘बिरामीलाई अक्सिजन दिएर पनि बचाउन सकिन्छ भनेर हामीले बाहिर कुर्सी, टेवल जे मा हुन्छ त्यसैमा राखेर अक्सिजन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो क्षमता भन्दा धेरै बिरामीलाई उपचार सेवा दिइरहेका छौं, तर, अब यो भन्दा अझै विकराल अवस्था आउने देखिन्छ।’
शुक्रराज अस्पतालमा अधिकांश बिरामीहरु अक्सिजन सपोटमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको आइरहेको डा मण्डलको भनाइ छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणका दर बढ्दै जाँदा संक्रमितहरु होम आइसोलेसन बस्न समेत डराउन थालेको उनले सुनाए।
सामान्य अवस्थाका बिरामीहरु समेत आकस्मिक सेवा कक्षबाट घर फर्कन नमान्ने गरेको डा मण्डलले बताए।
‘बिरामीहरु घरमा बस्न सक्ने अवस्था भएर डिस्चार्ज गर्न खोज्दा पनि बिरामीहरु घर जानै मान्दैनन्,’ डा मण्डलले भने, ‘यो समस्या निकै जटिल बन्दै गएको छ, संक्रमितको चाप धान्न मुस्किल पर्दै गइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्ययममा बोल्दै नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको बताएका थिए।
तर, अस्पतालमा २४ घण्टा नै संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरु भने प्रधानमन्त्रीको यो भनाई गलत भएको बताउँछन्।
‘बोल्यो भने सरकारको विरुद्धमा बोल्यो भन्ने आरोप लाग्छ, तर नेपालमा कोरोना संक्रमण कन्ट्रोलमा छैन,’ नाम नबताउने सर्तमा शुक्रराज अस्पतालकै अर्का एक चिकित्सकले भने, ‘बिरामी अक्सिजन अक्सिजन भन्दै छटपटाइरहेका छन्, कुर्सीमै राखेर उपचार गर्नुपरिरहेको छ कसरी कन्ट्रोलमा छ भन्न मिल्छ।’